Thwebula Battery Doctor 5.9 – Vessoft
Thwebula Battery Doctor
Battery Doctor – isofthiwe ngokonga futhi asebenzise icala battery more enenzuzo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukunquma isimo samanje kanye nokusebenza ibhethri ngaphansi imithwalo ezahlukene. Battery Doctor enezinto eziningi imisebenzi ukuvala izicelo angomahlalela, isilondolozi ihlanzekile futhi uvala izinqubo zangokwasemuva. Isofthiwe kwenza ukubuka izibalo eneji battery ukusetshenziswa izicelo kanye idivayisi operation inkathi lapho Wi-Fi kanye GPS module Unqanyuliwe. Battery Doctor futhi iqukethe iwijethi okuyinto ikuvumela ukuba kusebenze omunye amandla longe izindlela futhi ulungise izilungiselelo ezihlukahlukene idivayisi.
Prevention of the ngokweqile amandla ukusetshenziswa
Ukuhlolwa isimo kanye nekusebenta ukuhlinzwa ibhethri
Ukuqapha lokushisa ibhethri bese processor
Amandla Different londoloza izindlela
Amazwana on Battery Doctor:
Battery Doctor Ahlobene software:
English, Українська, Français, Italiano... CCleaner 1.16.62
English, Español, Deutsch, 中文... Vine 5.42.1
English, Español, Português, Italiano... Gmail 6.10.23.137993986